FCT93 andian-jiro LED tsy mipoaka (karazana B)
1. Ampiasaina betsaka amin'ny fitrandrahana solika, fanadiovana solika, indostrian'ny simika, tontolo iainana miaramila sy mampidi-doza hafa ary sehatra solika any ivelany, sambo mpitatitra solika ary toerana hafa ho an'ny jiro mahazatra sy ny jiro miasa.
2. Mety amin'ny tetikasa fanavaozana ny famatsiana angovo sy ny fanoloana toerana sarotra;
3. Mety ho an'ny tontolo iainana entona mipoaka faritra 1, faritra 2;
4. Atmosfera mipoaka: kilasy ⅡA,ⅡB, ⅡC
6. Mety amin'ny fepetra fiarovana avo, toerana mando;
7. Mety amin'ny tontolo iainana ambany hafanana ambony -40 ℃.
1. Aluminum firaka maty-fanariana akorandriaka, ny ambonin'ny electrostatically sprayed, ary ny bika aman'endriny tsara tarehy;
2. Ny radiatera dia mihinjitra avy amin'ny tensile aluminium firaka akora amin'ny avo mafana conductivity sy ny hafanana tsara dissipation vokany;
3. Azo atao ny mifidy bracket na jiro eny an-dalambe mifandray amin'ny jiro ilaina amin'ny toerana samihafa, ary mora kokoa ny manamboatra sy manavao.
4. Ny famolavolana jiro eny an-dalambe dia natao araka ny lalana roa amin'ny lalana lehibe ao an-tanàna, miaraka amin'ny faritra lehibe amin'ny hazavana sy ny hazavana fanamiana;
5. Firafitra porofo mipoitra mipoitra sy vita amin'ny vilany vita amin'ny baoritra, tsara indrindra amin'ny fipoahana sy herinaratra;
6. Stainless vy miharihary fasteners amin'ny avo harafesiny fanoherana;
7. Varavarankely mangarahara rakotra matevina, famolavolana anti-glare atomized, mahatohitra ny fiantraikan'ny angovo mahery vaika, manohitra ny hafanana hafanana, ny fampitana hazavana hatramin'ny 90%;
8. Teknolojian'ny herin'ny fiara mandroso, fidirana midadasika midadasika, miaraka amin'ny tsy tapaka amin'izao fotoana izao, fiarovana amin'ny faritra misokatra, fiarovana amin'ny faritra fohy, fiarovana amin'ny fiakarana ary asa hafa;
9. Mody LED marika iraisam-pirenena marobe, rafitra fizarana optika faharoa novolavolain'ny rindrambaiko optika matihanina, hazavana fanamiana sy malefaka, vokatra maivana ≥120lm / w, loko avo lenta, fiainana lava, fiarovana maitso sy tontolo iainana;
10. Advanced famehezana teknolojia mba hiantohana ara-dalàna ny asa maharitra amin'ny fiarovana avo sy mando tontolo;
11. Ny mekanika fanitsiana bracket natao manokana izay manitsy ny zoro fanazavana araka izay ilaina.
Parameter ara-teknika lehibe
1. Mifidiana tsirairay araka ny fitsipika ao amin'ny hevitry ny modely voafaritra, ary ampio ny fipoahana-porofo marika aorian'ny hevitry ny modely voafaritra.Ny embodiment manokana dia: "modely vokatra - kaody famaritana + marika tsy misy fipoahana + habetsan'ny baiko".Ohatra, ilaina ny jiro LED 100W tsy misy fipoahana, apetraka amin'ny bracket, ary 20 sets.Ny laharan'ny maodely dia: “Modely: FCT93-Specification: 100BFB+Ex d mb IIC T6 Gb+20.”
2. Jereo ny P431~P440 ho an'ny endrika fametrahana sy kojakoja voafantina.
3. Raha misy filàna manokana, azafady mariho ao amin'ny filaharana.
teo aloha: FC-ZFZD-E6W-CBB-J Jiro vonjy maika amin'ny afo / CBB-6J Series Fahazavana vonjy maika mipoaka
Jiro Led porofo mipoaka
BAD63-A andian-dahatsoratra fipoahana-porofo fahombiazana avo ...
Modely Implication Features 1. Aluminum Alloy maty fanariana akorandriaka, ny ambonin'ny electrostatic tifitra, tsara tarehy.2. Patented famolavolana ny multi cavity rafitra, fahefana famatsiana efitrano, hazavana loharano lavaka sy wiring lavaka telo tsy miankina tsirairay lavaka.3. Fampiasana borosilicate fitaratra mangarahara fonony na polycarbonate mangarahara fonony, fipoahana-porofo fampisehoana sy ny herinaratra fampisehoana ary azo itokisana.4. High harafesiny fanoherana ny Stainless vy miharihary fasteners.5. Cov mangarahara...
IW5130/LT andian-dahatsoratra Miniature fipoahana-porofo loha ...
Modely misy fiantraikany amin'ny endri-javatra 1. Fiarovana amin'ny fipoahana: Jiro azo antoka amin'ny fipoahana, mety amin'ny karazana toerana mora mirehitra sy mipoaka azo antoka;2. Mahomby sy azo ianteherana: Loharano jiro LED tsy misy fikojakojana tsy misy fikojakojana, fahombiazana manjelanjelatra avo, fiainana hatramin'ny 100,000 ora.Ny bateria dia mampiasa taranaka vaovao amin'ny batterie lithium polymère avo lenta, fiarovana, fandotoana ny tontolo iainana;3. Flexible sy mety: famolavolana fehin-doha olombelona, ​​fehin-doha malefaka, fle...
Ny endri-javatra momba ny modely 1. Ny fefy dia vita amin'ny firaka aluminium.Izy io dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny firaka aluminium mahery vaika ho an'ny fotoana iray, izay manana hery avo, fiasa tsara amin'ny fipoahana.Ny ivelany dia natsipy plastika tamin'ny alàlan'ny fanerena avo lenta taorian'ny fipoahana baomba tamin'ny hafainganam-pandeha avo, izay manana porofo lehibe amin'ny corrocion sy bika tsara tarehy.2. Ny fonony fitaratra toughened manana transmittance lehibe.Ny fasteners ivelany dia vita amin'ny vy tsy misy pentina.3. Ao amin'ny jiro, misy regulator elektronika ...
FCT93 andian-jiro LED tsy mipoaka
Modely Implication Features 1. Aluminum Alloy maty fanariana akorandriaka, ny ambonin'ny electrostatic tifitra, tsara tarehy endrika 2. Single LED fipoahana-porofo Modular famolavolana tsy manam-paharoa, dia azo voafantina araka ny fepetra takiana amin'ny jiro manokana bracket na mampifandray tanany, tsy nahy nivory tao amin'ny cast. jiro jiro, tondra-drano na jiro, mba hifanaraka amin'ny filan'ny jiro amin'ny toerana samihafa, fikojakojana sy fanatsarana kokoa.3. Famolavolana jiro an-dalambe mifanaraka amin'ny roa ...
Endri-javatra misy fiantraikany amin'ny modely 1.Izy io dia vita amin'ny firaka aluminium amin'ny hamafin'ny avo.ny ambonin`ny fasika fanapoahana, manana endrika tsara tarehy.2.Jiro manokana, maharitra ela, mora ampiasaina, mitahiry angovo sy mahomby avo lenta, manangona jiro malefaka (azo ampiasaina amin'ny lozam-pifamoivoizana sy fanadihadiana heloka bevava eo amin'ny sehatra sary, ny marika, dian-tanana, sary sns), flux mamirapiratra, 1200 lumen, fiaramanidina 600m, tohizo ny ora fiasana 8ora, raha miasa flux 600 lumen, manohy miasa ...
FC-BLZD-I1LRE3W-dyD-B jiro famantarana vonjy taitra...
Modely Implication Features 1. Aluminum firaka maty-fanariana akorandriaka, ny ambonin'ny tosidra avo electrostatic tifitra.2. Configuration ny fiainana lava be famirapiratana avo LED loharano hazavana, ambany fanjifàna herinaratra, avo famirapiratana, mahomby mahafeno ny angovo famonjena, ny fiarovana ny tontolo iainana fepetra 3. Naorina-in tsy fikojakojana ny batterie Ni-MH, ny asa ara-dalàna ny mandeha ho azy fiampangana, hery Ny tsy fahombiazana dia mety ho famatsiana herinaratra maika 90 minitra.4. Miaraka amin'ny famolavolana manokana ny faritra intrinsically azo antoka ...